मृत्युको मुखबाट यमराजलाई समेत छलेर भाग्न सफल यी ब्यक्तिको सत्य कहानी ! जनबोली न्यूज नेटवर्क प्रा. लि
मृत्युको मुखबाट यमराजलाई समेत छलेर भाग्न सफल यी ब्यक्तिको सत्य कहानी !
काठमाडौं । भन्छन्, जन्म, मृत्यु मानिसहरुको हातमा हुँदैन । तर हामीले त्यस्ता केही घटनाहरु देखेका वा सुनेका छौँ, जहाँ मानिसहरु यमराजलाई छलेर भाग्न सफल भएका छन् । यस्तै एक भिडियो अहिले बाहिर आएको छ ।
अमेरिकी राज्य म्यासेचुसेट्समा एकजना मानिसलाई जे भयो, जसले सबैलाई चकित पारेको छ । डेली मेलको समाचारका अनुसार ग्रीनफील्डका निवासी मेथ्यू बेटे शनिबार आफ्नो घरको पोखरीमा सुतिरहेका थिए ।
त्यसपछि एउटा भालु मुख्य ढोकाबाट भित्र पस्यो । सुरक्षा क्यामेरा (सिसि क्यामेरा) ले खिचेको फुटेजले भालुलाई हिंड्दै गरेको देख्न सकिन्छ । त्यसपछि मेथ्यूकहाँ जानुभन्दा पहिले पोखरी वरपर घुम्दै गरेको र पानी पिइरहेको देख्न सकिन्छ । यो भिडियो सामाजिक सञ्जालमा एकदम भाइरल भइरहेको छ ।
उक्त भालु मेथ्यूकहाँ गएर उनको शरीरमाथी उसको खुट्टा राख्यो । तिजा स्वरूप, उनको निद्रा खुल्यो र अचानक भालु भाग्यो । भालु म्याथ्यु ब्यूँझने बित्तिकै भागेको भिडियोमा देख्न सकिन्छ । ति व्यक्तिले भालुको घरबाट बाहिर निस्केर भाग्दै गर्दा फोटो पनि लिएका हुन् ।
मास लाइभका अनुसार उनले भालुको फोटो लिएका हुन् । उसले त्यो तस्वीर श्रीमती डान बाटेलाई पठाए । डन बेटेले भने, ‘उनले मलाई भालुको अगाडी पछाडिबाट गएको तस्बिर देखाइदिए र पोखरीको नजिक सुतिरहेको बेला भालूले उसको खुट्टा समात्यो ।’ त्यो भिडियोपनि सीसी क्यामेराले कैद गरेको रहेछ ।
डन बेटले फेसबुकमा भिडियो पनि सेयर गरेकी छिन् । क्याप्शनमा यो पनि लेखिएको छ, ‘हिजो मेथ्यू (श्रीमान) डराएको थियो, उसले पोखरीको नजिक आराम गर्दा भालुको सामना गर्यो ।’ उसले मृत्युको मुखबाट यमराजलाईपनि छलेर बाँच्न सफल भएको छ । यही शब्दमा सामाजिक प्रयोगकर्ताहरुले यो सामाग्री खुबै सेयर गरेर भाइरल बनाइरहेका छन् । News Source